Maxakamad ayaa xukun ku ridday nin ku eedeysnaa inuu dilay Ra’isal wasaarihi hore ee Lubnaan. | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Maxakamad ayaa xukun ku ridday nin ku eedeysnaa inuu dilay Ra’isal wasaarihi hore ee Lubnaan.
Maxkamadda ay qaramada midoobay gacanta ku hayso ayaa xukun ku ridday nin ka tirsanaa maleeshiyada Xizbullah kaddib marki lagu helay inuu ku lug lahaa dilki loo geystay Ra’isal wasaarihi hore ee Lubnaan Rafiiq Xariiri.
Qoraalka sawirka,Qarax Beyruut waxaa 2005-tii lagu dilay Rafiiq Xariiri iyo 21 qof oo kale.
Garsoorayaasha dacwadda qaadayey oo ku sugan Netherland waxay sheegeen Saalim Ayyash inuu door muhiim ah uu ku lahaa qarixi Mr Xariiri lagu dilay 2005-kii.
Ayyash oo ah ninka ay maxkaadda xukunka dambiilanimo ku ridday iyo xubnaha kale ee dacwadda kula jira muddo lix sana ah waxay dacwaddooda socotay iyaga oo maqan.
Dilki xilligaasi loo geystay siyaasiga muslimiinta sunniga ka soo jeeda ee caanka ahaa Mr Xariiri waxay dalka Lubnaan ka abuurtay xiisad siyaasadeed oo aad u weyn.
Hase yeeshee, Xizbullah wuxuu marar badan ku gacanseydhay inuu dilka Xariiri uu wax lug ah ku lahaa.
Qoraalka sawirka,Sacad oo ah wiil uu dhalay Rafiiq Xariiri wuxuu sheegay qoyska ineysan nasaneyn ilaa xukunka la fuliyo
Sacad Xariiri oo ah wiil uu dhalay Rafiiq Xariiri horayna u soo noqday Ra’isal wasaaraha dalka Lubnaan, wuxuu warbaahinta u sheegay: “Waxaan u maleynayaa cidwalba waxa ay fileysay iyo waxa maanta soo baxay, balse waxaan aaminsanahay go’aanka maxkamadda ka soo baxay inuu yahay mid lagu qanco waana aqbalanay.”
Hadda waxaa la joogaa xilligi Xizbullah ay waxbadan huri lahaayeen.
Xukunka maxkamadda ay Ayyash ku ridday ayaana ku soo beegmaya xilli dalka Lubnaan uu la daalaa dhacayo dhibaatooyin dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Laba usbuucna ay ka soo wareegtay qaraxi naxdinta badnaa ee Beyruut gilgilay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 180 qof.
Qaraxaasi oo sababay iney isacasisho xukumadda dalkaasi Lubnaan, isla-markaana ay billowdaan mudaharaadyo shacabka ay kaga cabanayaan burburka dhaqaale ee dalkaasi soo foodsaaray ee sababay iney dad badan shaqa la’aan noqdaan.
Xukunka maxkamadda wuxuu niyadjab uu ku abuuray taageerayaasha Rafiiq Xariiri, qoysaska 21-kii qof ee qaraaxsi ku dhimatay iyo 226 qof uu qaraxaasi dhawaaca ka soo gaaray.
Ninka xukunka lagu riday, Salim Ayyash wuxuu ahaa nin xiriir dhow la leh ururka Xizbullaah oo ah urur hubeysan oo siyaasadda dalka lubnaan saameyn badan ku leh. UK iyo Mareykanka iyo waddama kalana ay ururkaasi u yaqaannin argagixiso,
Madaxa ururka Xizbullaah xasan Nasrallaah wuxuu ku gacan seydhay inuu ururkiisu wax lug ah ku lahaa qaraxaasi, isaga horistaagay in la soo qabto Ayyash iyo xubnaha kale ee ay dacwadda ku wada socotay. Mustafa Badreddine oo ka mid ah saraakiisha ciidan ee Xizbullaah oo arrintan lala xiriiriyeyna 2016-kii waxaa lagu dilay dalka Suuriya.
Taageerayaasha Xariiri iyo dadka kalaba waxay aaminsan yihiin Ayyash inuu falkaasi u ku fuliyey amar ay siiyeen taageerayaasha Xasan Nasrallah, Suuriya iyo Iran. Maadaamaa ay u arkayeen Rafiiq Xariir u arakeyeen mid caqabad ku noqon kara danahooda siyaasadeed.
David Re oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda wuxuu sheegay maxkamaddu iney sabab heshay balse ay caddeyn buuxda helin.
Hase ahaatee, xukunka lagu riday ninkan Xizbulaah ka tirsan waxay sii hurin doontaa siyaasadda Lubnaan ee markeedi horaba xumeyd.
Rafiiq Xariiri wuxuu ahaa nin muslin Sunni ah oo taajir ah, wuxuuna dalka Lubnaan uu Ra’isal wasaare uu ka soo noqday shan xilli ama shan jeer inta uu socday dagaalka sokeeye oo u dhaxeysay 1975-1990-kii.
Xilka Ra’isal wasaaranimadiisana waxay ku ekeed 2004-tii, isaga oo isabahaysi siyaasadeed baarlamaanka kula sameystay mucaaradka kuna baaqay iney Suuriya ciidamadeeda Lubnaan kala baxdo, madaamaa ay ciidamada Suuriya ilaa iyo 1976-kii ay Lubnaan ku sugnaayen.
Subaxnimadii 14-ka Fabraayo 2005-tii, Xariiri oo ay ilaala aad u xooggan la socdaan oo hormarayey Huteelka St George ee ku yaalla bartamaha magaalada Beyruut, waxaa ku qarxay bam gaari lagu soo xiray.
Qaraxa oo ahaa mid xooggan wuxuu burburiyey dhammaan gaadiidki waddadaasi marayey iyo dhismayaashi ka agdhawaa goobta uu qaraxu ka dhacay.
Dilka Xariiri xilligaasi loo geystay waxaa ka dhashay mudaharaadyo tobannaan kun oo shacab ah ay ka qayb qaateen oo looga soo horjeeday dowladda dalka Lubnaan xilligaasi ka arimineysay ee gacansaarka la lahayd Suuriya, iyada oo ay mudaharaadayaashu ay farta ku fiiqayeen waddama jaarka la aha Lubnaan iney dilka loo geystay Rafiiq xariiri ay ka dambeeyeen.
Dowladdi markaasi jirtayna laba usbuuc kaddib ayey iscasishay ciidamadii Suuriyana bisha April ayey dalka Lubnaan ka baxeen.
Qoraalka sawirka,Dilka Xariiri loo geystay waxaa ka dhashay mudaharaadyo ballaadhan oo caasimadda Beyruut ka dhacay
Marki la soo uruuriyey macluumaadka la xiriiray dhacdadan, 2007-dii Qaramada Midoobay iyo Lubnaan oo iskaashanayo waxay dhiseen guddi qaraxaasi baaro kaddibna waxaa dacwad dilkaasi la xiriira lagu soo oogay afar qof iyaga oo maqan.
Dhageysiga dacwadda iney billaabatana waxaa looga duulay baaritaan lagu sameeyey taleefannada iyo xoga la helay oo ku saabsanaa qorsheynta, diyaarinta iyo fulinta qaraxaasi.
Dambibaaraha dalka Lubnaan u dhashay ee ku salgaaray xogaha taleefanka billowgi baaritaanka oo lagu magaacaabi jiray Wissan Eid waxaa isna la dilay 2008-ddii.
Maxey garsoorayaashu sheegeen?
Waxay xukun dambiilanimo ay garsoorayaasha maxamadda ku rideen Ayyash oo 56 jir ah kaddib marki lagu helay lix dacwadood oo lagu soo oogay, oo ay ka mid yihiin shirqool fulin fal argagixiso oo uu ku dhaqaaqay, inuu fuliyey fal argagixiso isga oo adeegsaday walxaha qarxa, iyo dil qorsheysan uu u geystay Xariiri isaga oo adeegsanayey walxaha qarxa.
Qoraalka sawirka,Salim Ayysh halka uu ku sugan yahay weli lama garanayo
Dacwad oogayaasha Lubnaan waxay Ayyash ku eedeeyeen inuu yahay ninka soo maleegay weerarkaasi isaga oo kaashanayey Mustafa Badreddine, oo u kormeerayey Xariiri.
Ayyash waxaa sida oo kale lagu eedeeyey inuu isagu soo iibiyey gaariga qaraxa loo addeegsaday, iyo kaalinta uu ku lahaa xogta beenta ah ee sheegeysay inuu weerarkaasi geystay nin falastiini ah oo ka tirsan musliminnta sunniga xagjirka ah.
Maxkamadda qaadeysay dacawadda Ayyash oo u qabatay qareen difaaca, ayaa wuxuu qareenku sheegay maxkamadda xukunkeeda iney ka duushay oo keli ah sababa balse ay helin caddeymo muujinaya kaalinta uu Ayyasha dhacdadaasi kulahaa.
Balse garsoore David Re wuxuu talaadadi sheegay: “Mr Ayyash inuu door muhiim ah ku lahaa qaraxaasi si toos ahna uu uga qayb qaatay.
Qoraalka sawirka,Hoggaamiyaha ururka Xizbullah Xasan Nasrallah ayaa xukunka maxkamadda ku gacanseydhay isaga oo ku tilmaamay shirqool
Garoosrayaasha maxkamaddana waxay sheegeen ineysan jirin caddeyma cad oo loo helay shakiga laga qabay falkaasi iney ku lug lahaayeen seddexda qof ee kala ah Assad Sabra oo 43 jir ah, Xuseen Oneissi oo 46 jir ah iyo Xasan Xabiib Merhi oo 54 jir ah.
Qaraxii lala beegsaday Ra’isal wasaarihi hore ee dalkaasi Lubnaan waxaa ku dhimatay Rafiiq Xariiri iyo 21 qof oo kale iyada oo ay ku dhaawacmeen dad ka badan 226 qof
Maxakamad ayaa xukun ku ridday nin ku eedeysnaa inuu dilay Ra’isal wasaarihi hore ee Lubnaan. was last modified: August 19th, 2020 by Admin
Shiinaha oo si adag uga horyimi xiriika Somaliland iyo Taiwan
Dhageyso+Sawiro:-Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ay wehliyaan wasiirka iyo wasiir ku xigeenka warfaafinta oo kulamo la qaatay madaxda saree e ururka suxufiyiinta Koonfur Galbeed
Dhageyso: Maxaa Ka Cusub Amniga Guud Ee Degaanada KG.